ComPro ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်ချက် - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်အစီအစဉ်
မေလ 29, 2018 /in ဘ‌‌လော့ခ် /by cre8or
တစ်သက်တာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် Professional ကကြီးထွားမှုအတွက်အဆင့်မြင့် Software Development ပညာပေး:
1 ။ လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာများနှင့်အတူတက် Keeping
2 ။ အဆိုပါအိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတောင်းဆိုချက်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်
ကံမကောင်းစွာပဲအများစုဘွဲ့ရအစီအစဉ်များသည်ဤအရေးပါစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စေနှငျ့ဆကျဆံဘို့ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများကိုပူဇော်ကြပါဘူး။ "စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်ထူးခြားတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်သောဤစိန်ခေါ်မှုများဖို့အများကြီးလိုအပျသောဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်နေရာအရပ်ဖြစ်၏," Greg Guthrie, ပညာရေးဆိုင်ရာ Technologies က၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒင်းဂုဏ်ထူးဆောင်နှင့်ဒင်းကပြောပါတယ်။
အဘယ်အရာကို mum ပညာရေးထူးခြားတဲ့စေသည်?
ဒီထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်မှု၏အခြေခံသည့် Transcendental Meditation® technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသန, ဒီရိုးရှင်းတဲ့ဘာဝနာ technique ကိုကွောငျးဖျောပွတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် 20 မိနစ်လေ့ကျင့်အလွန်အသစ်သောအရာသင်ယူခြင်းအထောက်အကူ - ​​ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာလျင်မြန်စွာအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတက်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်နေပါသည်ရုံအဘယ်အရာကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွဲ့ရအရေအတွက်ငှားရမ်းထားသူဂျက်ဖရီ Abramson, mum မှာဂေါပကဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသောကြောင့်အထူးပညာရေးဤနည်းကိုဖော်ပြထားတယ်:
"တစ်ဦးအလုပ်ရှင်နှင့်အမျှကျွန်မ mum ရဲ့ ComPro နှင့်စာရင်းကိုင် MBA ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များ 15 ဘွဲ့ရငှားရမ်းထားကြခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်သူတို့ရဲ့ mum ပညာရေးယနေ့တောင်းဆိုအလုပ်ခွင်အဘို့ထိုသူတို့ပြင်ဆင်ပုံကိုကောင်းစွာစွဲမှတ်ခဲ့ကြပြီ။ "
"mum သင်ယူမှု, အထူးအတွင်းသတိပေးချက်များ, ယနေ့အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါကြောင်းကိုနက်ရှိုင်းသောယုံကြည်မှုအတွက်ကျောင်းသားများကို '' ကျယ်ပြန့်အကျိုးစီးပွားငါ့ကိုနှိုးကြောင်းပညာရေးမှတစ်မူထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ core ကိုအစိတ်အပိုင်းသိစိတ်ကို- အခြေခံ. ပညာရေးပါပဲ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကျောင်းသားအတွင်းလုံခြုံပြီးသာယာဝပြောတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းလူသားတစ်ဦးနှင့်လူမှုရေးအရသတိခေါင်းဆောင်ကိုလတ်ဆတ်တဲ့စိတ်ကူးများ၏လောကဓာတ်စိတ်အား။ "
TM အလိုအလျောက်ပင် 10 နှစ်အရွယ်ကလေးများထိုသို့ပြုမှလေ့လာသင်ယူကြောင်း, လေ့ကျင့်နိုင်အောင်အင်အားစိုက်ထုတ်သည်။ Transcendental တှေးတောဆငျခွနေတဲ့အတွေးအခေါ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကဘာသာရေး, ဒါမှမဟုတ်ဘဝတစ်လမ်းမဖြစ်အဘယ်သူမျှမယုံကြည်မှုများသို့မဟုတ်ပါကမယုံ-ပါဝငျသညျ။ တစ်ဦးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း TM အလိုအလျောက်သင်တန်းပို့ချခြင်းဖြင့်ဆုံးမသွန်သင်သည့်အခါတောင်မှသံသယဝါဒီ TM အလိုအလျောက်လုပ်နေတာမှအကျိုး။ အဆိုပါ TM အလိုအလျောက် technique ကို 60 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း Maharishi Mahesh Yogi ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်, ကျော်ခြောက်လလူဦးရေသန်းနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ TM အလိုအလျောက်လုပ်ပေးသောအခါ, ဤရှင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်ကျယ်ပြန့်အသိပညာပေးရလဒ်များ, လူနေမှုအတွက်အတွင်းစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတိုးလာ, စာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကနေကယ်ဆယ်ရေး Reception တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ပုံမှန် TM အလိုအလျောက်အလေ့အကျင့်ကတဆင့်ဒီသဘာဝဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေပေးသည်နှင့်သဘာဝစုဆောင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖျက်သိမ်းနေချိန်မှာလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းပညာနှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူစွာဖွင့်ထားရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်အနာဂတ်စိတ်ဖိစီးမှုပိုမိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာ၏အားသာချက်များဘွဲ့ရအရာဖြစ်တယ်။
ဤဗီဒီယိုကိုသင်ခစျြလိမျ့မညျ Sarju ပန်ဒစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ComPro အတွက်အတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြနှင့်အတူSM အစီအစဉ်။
ဤတွင်အာမန်, ဂျော်ဒန်ကနေဘာကျောင်းသားလီ Alrahahleh, ရဲ့, Walmart Labs ကမှာမိမိသင်ရိုးလက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်အတွက် Transcendental တှေးတောဆငျခွ၏တန်ဖိုးအကြောင်းအကြီးတန်းဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ် Sunnyvale, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Co. , ပြောရှိပါတယ်။
"ငါတကယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှလာမယ့်ကတည်းကတန်ဖိုးထားသော mum မှာရိုးရှင်းပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ technique ကို, လေ့လာသင်ယူကြသည်။ ကြှနျတေျာ့ကိုမှန်ကန်ဘဝကိုစတင်ခဲ့ပြီး, ငါ့တာဝန်များကိုစုဆောင်းသည့်အခါငါတကယ်အကြှနျုပျ၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်ငြိမ်ဝပ်စွာအချို့ကိုအချိန်လေးရှိသည်ဖို့လိုတယျ။ "
"လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမြို့သူမြို့သားပရမ်းပတာ, ငါ့အစာရှောင်ခြင်း-အရှိန်အဟုန်ဘဝအတွင်းမှာပဲ, ငါ့ 20 မိနစ်ဆင်ခြင်ငြိမ်းချမ်းရေး, အသက်နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာ၏ကြောက်မက်ဘွယ်အချိန်လေးရှိကြ၏။ ငါနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို, ငါ့စိတ်ကိုနုပျိုနှင့်မိနစ်နှစ်ဆယ်အားကစားလုပ်နေတာ, ငါ့ကိုငါ့အလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဆက်လက်အများကြီးစွမ်းအင် ပေး. အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြောင်းနိုင်ဘူး။ ဒါဟာငါ့ကိုဒါဖန်တီးမှုကိုဖန်ဆင်းနှင့်ငါ၏ကျယ်ပြန့်စဉ်းစားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကိုအစဉ်အမြဲငါဘဝမှာသင်ယူကအကောင်းဆုံးအရာကြီးထင်, အခုငါက၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအများကြီးပိုကြည့်ပါ။ "
"စိတ်ဖိစီးမှုဆော့ဖျဝဲပရိုဂရမ်အတွက်အဓိကကစားသမားဖြစ်တော်မူ၏ သတ်မှတ်ရက်အချိန်ပေါ်ပြီးဆုံးရန်လူများ, မတည်မငြိမ်ဒေါသထွက်နေတဲ့နှင့်အပူတပြင်းပါစေ။ TM အလိုအလျောက်၏အကူအညီနှင့်အတူ, ငါပိုပြီးအာရုံစိုက်နှင့်အချိန်အများစုကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်, နှင့်မြင့်မားသောသဘင်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ငါ၏အကုမ္ပဏီအတွက်ပြည်သူ့လျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်းငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်ငါ TM အလိုအလျောက်အကြောင်းကိုဆောင်းပါးများသူတို့ကိုထောက်ပြသည်။ "
TM အလိုအလျောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ် Published သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန
ကျယ်ပြန့်ထုတ်ဝေသုတေသနဒီအင်အားစိုက်ထုတ် technique ကိုနက်ရှိုင်းသောအတွင်းပိုင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ပြည်နယ်ကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့်မြှင့်တင်ရန်စွမ်းရည်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုသင်ယူခြင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
380 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ထက်ပို သုတေသနလေ့လာမှုများ အဆိုပါ TM အလိုအလျောက် technique ကိုအပေါ် 160 သိပ္ပံနည်းကျဂျာနယ်များကျော်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေက Harvard Medical School ကနှင့်စတန်းဖို့ဒ် Medical School ကျောင်းတွင်အပါအဝင် 200 သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများထက်ပိုမှာပါကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ကနျြးမာရေး၏အမေရိကန်အမျိုးသား Institute (NIH) ကျော်ကို mum သုတေသီများချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ် သုတေသနအတွက် $ 26 သန်း ကျန်းမာရေးအပေါ် Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကို၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်။
ဒါဟာကျောင်းဝင်းအပြုံးအပေါ်လူတွေ, နွေးနွေးထွေးထွေးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှုတ်ဆက်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါင်နှင့်စစ်မှန်စွာရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကုမ္ပဏီပျော်မွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားကျောင်းသားကိုယ်ခန္ဓာ၏အသင်းဝင်များတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့ Multi-ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုမျှဝေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ mum ၏တရားမဝင်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်, "ဒီကမ္ဘာကြီးငါ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်!"
Tags: ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, မဟာဘွဲ့, Transcendental Meditation® technique ကို
https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/eIMG_2219_462X284b-ds.jpg 435 700 cre8or https://compro.miu.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-442x112.png cre8or2018-05-29 21:05:082018-06-18 19:10:28ComPro ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုဖို့လျှို့ဝှက်ချက်
ဒေတာကိုသိပ္ပံက MS အထူးပြုအိုင်အိုဝါ, 2018 အတွက်၎င်း၏မျိုး၏ထိပ်သခင်၏အစီအစဉ်သည်အမည်ရှိ
နယူး: Computer ကိုပညာရှင်များအစီအစဉ်ကျဘျဆိုကျ
Transcendental Meditation®နည်းစနစ်: အိုင်တီပညာရှင်များများအတွက်ယှဉ်ပြိုင် Edge
ဒေတာကိုသိပ္ပံက MS အထူးပြုင်း၏ကြင်ကြင်နာနာ၏ထိပ်သခင်၏အစီအစဉ်သည်အမည်ရှိ ... 2018 ComPro ကျောင်းဆင်းပွဲ & Homecoming